Ukuhambisa izipho kubantu bomdabu kunomusa kakhulu. Kodwa ukukhetha nokusungula izipho kuyamnandi kunokwesaba kabili. Ngifuna isipho sibe sesiqalo futhi singavamile. Hlela ngokushesha-noma ngabe ufuna ukuhamba kuzo zonke izitolo zedolobha noma wenze isipho ngokwakho. Cabanga ngemibono yezipho eziningana, bese ukhetha okufaneleka kakhulu eminyakeni yobudala kanye nokuzilibazisa. Kunzima kakhulu ukukhetha isipho kumuntu iminyaka engama-35. Umuntu usevele usevele, futhi mhlawumbe ocebile. Kodwa nokho ungakwazi ukuza nokukhetha okuningi.
Ukunikeza izipho kuyinto yobuciko bonke! Kubalulekile ukuzwa umuntu omncane ukuqonda ukuthi ufuna ukuthini leli holide. Izinkumbulo ezizwakalayo zalolu suku kumele zihlale phakade ememori yosuku lokuzalwa. Ngakho-ke, udinga ukucabangela ngokucophelela ukhethe okukhethwa kukho.
Isipho sokuqala somuntu ngosuku lwakhe lokuzalwa - indiza ebhalini lomoya elishisayo. Loluhambo olufushane lothando, uzokhumbula isikhathi eside. Isithombe esibalabala singasindiswa odongeni, sihlele amafremu amahle. Injabulo enjalo, njengezindiza ezintathu zehora, ayibizi kakhulu. Ngenawe ebhodini ungathatha izithelo ne-champagne. Uma ubheka izindlu ezincane, amadoda amancane ngezansi, ngeke ubone ukuthi isikhathi sizohamba nini. Yiqiniso, kufanele wazi kusengaphambili ukuthi ngabe indoda yakho iyesaba yini izindawo eziphakeme. Futhi uma impendulo enhle, kungcono ukushiya umsebenzi onjalo.
Manje kungokoqobo ukunikeza ukubonakala. Emva kwakho konke, noma yini ongayithengela wena othandekayo ngokwakho. Kodwa akubona wonke umuntu ongenquma okuthile okudlulele, okungavamile. Ukuhamba nge-hang-glider, uhambe emfuleni kuma-Kayaks, uhambele ukulwa ngaphandle kwemithetho njengombonisi. Isipho esinjalo sokuqala somuntu ngosuku lwakhe lokuzalwa sizokhunjulwa isikhathi eside futhi sizoshiya umbono ocacile kakhulu.
Uma umfana wokuzalwa engumyeni wakho oyintandokazi, ungamnika ngempelasonto engawulibaleki yedwa. Thatha ikamelo ehhotela elihle lezwe, ngaphandle kokukhathala nokuqeda. Ungalayela igumbi lalabo abasanda kushada. Izohlobisa kahle, futhi i-champagne ebandayo kanye nama-rose petals izoletha ukuthinta ngothando. Impelasonto esondelene kakhulu isipho esingcono kakhulu somuntu iminyaka engama-35. Emva kwakho konke kule minyaka, abameleli abaningi bezocansi abanamandla ababhekana nobunzima, bazizwa bekhulile. Nakuba lokhu kungenjalo! Emva kokuchitha isikhathi sodwa, uyozizwa ukuthi udinga nje kuphela, futhi imizwa ekhulayo izophinde ivuke.
Ake sikhumbule intsha
Owesifazane onesibindi kuphela ongenza isipho esinjalo kumyeni wakhe iminyaka engama-35. Uma ebusheni bakhe lo muntu wayengumphefumulo wenkampani, wayethanda ukuvakashela amakilabhu ebusuku nezindawo zokudlela ezinhle, amnike ubusuku benkululeko! Bhala itafula ku-nightclub ephathekayo bese uyithumela enkampanini yabangani abangcono kakhulu. Ngobusuku uzokhumbula isikhathi eside, ehlonipha umfazi wakhe oziphikisayo.
Iqiniso elidala liqinisile njalo. Isipho esingcono kakhulu somuntu ngosuku lwakhe lokuzalwa - esenziwe yedwa! Zama ukwenza i-collage "Imiemo". Qoqa isithombe esithandekayo kakhulu esithombeni, esithatha umndeni wonke, umfana wokuzalwa ebusheni bakhe nasebuntwaneni. Ungathenga ifreyimu enkulu yesithombe bese unamathisela ngokucophelela isithombe lapho. Ukuhluka okuzokonga kuyishidi lika-Whatman. Kuyo ungathola iphephandaba langempela lodonga ngamaphuzu amahle kumfanekiso ngamunye.
Wonke amakhadi abhalwe ngezandla ngesandla. Uma umfana wokuzalwa ebusika, unikeza indoda iminyaka engu-35 emasokisi aqoshiwe ngokubhalwe okungavamile noma ngesitokisi, imoto, amasinki. Ungakwazi ukubopha ama-shorts e-woolen negama lendoda "endaweni ewusizo kakhulu." Kulula kakhulu ukuthunga ama-slippers kusuka ku-leatherette, ungawahlobisa ngegama elidumile lomkhiqizo. Ngemikhakha enekhono, ungakha izipho ezithakazelisayo, futhi ugcine isabelomali somndeni wakho .
Uma ufuna indoda ikukhumbule njalo ngeminithi, mnike iketane, indandatho, isisindo, isongo angayigqoka nsuku zonke. Ubucwebe besiliva ngesimo sezinto zokucweba ezifanelekile. Ungenza ukudweba ngamazwi afudumele ku-ring noma ngesikhatsi. Manje amadoda athande futhi agqoke imihlobiso engaphansi kwabesifazane. Imihlobiso eminingi ikakhulukazi emigqonyeni yensiza noma yesikhumba ibheka kahle kakhulu. Bakha isitayela esiyingqayizivele somnikazi wayo. Amasongo anamandla ane-weaving enhle nawo athandwa kakhulu ngobulili obunamandla. Bheka esitolo sokugqoka bese ukhetha isipho esihle kumuntu wakho.
Umngane, osebenza naye, isihlobo
Isipho somuntu oneminyaka engama-35 singaba lula futhi siyadingeka. Uma kungumsebenzi osebenza naye noma umngane, nikeza isethi yamathuluzi esikhwameni esikhethekile. Isethi elinjalo lihlala liwusizo endlini: ama-screwdrivers, amapulethi, isando, abone. Unganika ithuluzi elihle likagesi, uma umuntu ethanda ukwenza izandla zakhe.
Akekho oye wakhansela izikhumbuzo ezinhle noma. Ezitolo ezincane ungathola izipho ezithakazelisayo. Isikhumbuzo se-souvenir, esingasindiswa odongeni. Zonke izinhlobo zama-daggers, ama-sabers asebenzayo kanye nezibhamu zizohlobisa igumbi lala madoda. Ama-Figurines, ama-ashtrays angavamile, amabhange e-piggy - okungekho kuphela ezitolo zokukhumbuza.
Uma iJubane ithanda izilwane, mnike i-parrot ephilayo noma i-hamster. Lesi silwane esincane esihle ngeke sishiye umuntu ongathí sina.
Amadoda amaningi athanda ukungaphuzi utshwala, kodwa ukuwaqoqa. Ngejubili elinjalo, ngeke kube nezinkinga. Vakashela isitolo sotshwala bese ukhetha ibhodlela lokuqoqa. Uzohlala eshalofini noma emiphongolweni futhi akukhumbuze usuku olumnandi olwenziwe!
Ngingathanda ukumangaze ngesipho. Kodwa kukhona abantu abazisho kusengaphambili lokho okufanele banikeze. Noma njengezipho ezivamile ezivamile. Uma kunjalo, ungazami. Labo abanehhovisi labo noma idesksi ehhovisi, ungakwazi ukuletha izinto ezibizayo zehhovisi. Amaseti akhethekile atholakala ekuthengiseni ebangeni elikhulu: ukhuni, itshe, ipulasitiki. Isipho kumuntu oneminyaka engama-35 ngesimo se hookah kuyoba mnandi kakhulu. Umuntu obhemayo angakhetha icala elihle lokubhema ugwayi noma umshini wokukhanyisa umkhiqizo.
Isipho esivamile singabhekwa njengekhwalithi, ibhande lesikhumba noma isikhwama sekhanda. Into enjalo isetshenziswa njalo ekuphileni kwansuku zonke.
Nikeza osebenza naye noma umngane ucezu lobuciko. Kuye ngesabelomali, thola isithombe somculi wendawo noma odumile. I-oda lomsebenzi wobuciko uhlaka oluhle futhi unikele ngokugcwele okwamanje.
Ubuntwana abuzange buhambe
Inketho yokunqoba iyimodeli yemoto noma umkhumbi njengesipho kumuntu ngosuku lokuzalwa kwakhe. Ngezandla zakhe uzoqoqa imininingwane futhi athole ithoyizi yangempela yokuqoqa. Ngemuva kwalokho, amadoda njalo ahlala emiphefumulweni yabo njengezingane. Isipho esinjalo sizohlobisa idesksi noma ishalofu ekamelweni lomuntu wokuzalwa. Noma mhlawumbe uzoba nesithakazelo kule nqubo futhi esikhathini esizayo uzoqoqa iqoqo lonke.
Noma ngabe yisiphi isipho okhethayo, qiniseka ukuthi uhamba nayo ngamazwi aqotho, anomusa nezifiso. Phela, igama elifudumele liyigugu kunanoma isiphi isipho, ngisho nangokweqile nakakhulu. Ungapheli izifiso, lungiselela amagama kusengaphambili, mhlawumbe uthole izinkondlo. Ungakhohlwa ukuhalalisela abathandekayo bakho ngosuku lwakho lokuzalwa. Kuhle, uma ukhumbula futhi uyakwazisa!